#raiseyourvoice eto Madagasikara #bad2015 » lay andriamialy
Accueil Actus #raiseyourvoice eto Madagasikara #bad2015
Mandray anjara amin’ny #BAD2015 indray ny tenanay amin’ity taona ity. Hetsika isan-taona ataon’ny mpanao blaogy manerantany izy io hanoratana mikasika lohahevitra iray. Amin’ity 2015 ny lohahevitra noraisina dia ny hoe #raiseyourvoice izany hoe « asandrato ny feonao ». Dia satria sy nahoana moa, raha ny hevitr’i Lay Andriamialy no tokony hanandram-peo?
Ny fitenenana ny ao am-po dia sady zo no adidy. Manan-jo hiteny ny olombelona rehetra nefa tsaraina amin’ny teny avoakany koa. Toy ny zo rehetra anefa dia misy ireo izay tsy afaka mampiasa izany amin’ny tokony ho izy, voafehy, voatampim-bava. Ary matoa averina indray ho lohahevitra ny hoe #raiseyourvoice dia satria heverina fa tokony mbola ampitomboina izany fahafahana izany. Ary koa na ireo afaka aza dia tokony entanina hampiasa izany bebe kokoa.
Vao omaly aho no niady hevitra tamin’ny namana iray mipetraka any andilam-bato. Niresadresaka momba ny fiainana teo moa dia nampitovy ny vokatry ny fiakaran’ny hafanana maneran-tany amin’ireo firenena samihafa. Any Eoropa dia lasa aloha be ny ririnina ka dia efa misy sahady ny oram-panàla na dia vao volana okotobra aza izay tokony ho fararano any amin’izy ireo. Aty Madagasikara moa dia efa mitaintaina sahady hiatrika ny orana, rivo-doza, fihotsahan’ny tany, tondra-drano sns. Dia samy niteny teo fa ireo tsy manan-kialofana no mampalahelo indrindra. Saingy tsy mitovy hoy aho ny fandraisan’andraikitry ny fanjakana any Eoropa sy eto Madagasikara rehefa misy ny loza manambana sy mihatra.
Ny tsy nampitovy hevitra dia ity. Hoy izy hoe « tsy avotra intsony Madagasikara ». Izany raha ny fahazoany azy no maha-be dia be ireo tanora mandao tanindrazana ary mamelon-tena any amin’ny firenen-kafa. Amiko, voalohany, samy manana ny antony handehanany fa tsy voatery hoe fitsoahana. Ny malagasy rahateo, maro fihaviana, manana fifandraisana amin’ny kontinanta 3 dia Afrika, Azia ary Eoropa. Tsy vitsy no manana havana any amin’ireo tany ireo. Ary amin’ny maha-nosy an’i Madagasikara dia tsy afaka mahita tany hafa raha tsy miampita ranomasina. Sarotra kokoa izany noho ny hoe avy ao Lafrantsa hiantsena vetivety ao Espana na avy ao amin’ny firenena afrikana iray handehandeha eran’i Afrika. Matoa mandeha ny gasy iray dia efa misy antony lehibe ao izay.
Ny hoe tsy avotra intsony indray, manaraka izany, dia tsy haiko satria tsy mpaminany aho. Ny hevitro fotsiny dia ny hoe « mbola misy ny azo atao ». Namana vazaha iray moa, manana fomba fijery mitodika amin’izay « azo atao » izay rehefa mahita ny eto dia manao hoe « tout reste à faire » (ny rehetra mbola mila atao). Tsy amin’ny maha-vazaha azy no itantarako izany fa satria izy no niteny. Fomba roa no azo ijerena an’izay dia ny hoe « tsisy n’inona n’inona mihitsy eto » sy ny hoe « misy zavatra azo trandrahina eto ». Iray ihany nefa ny hetsika tokony aterak’izany dia ny hoe « tairo ary hanao zavatra ».
Be dia be ny fanakiviana nolazainy nanoherana izay hevitro izay. Tao ny hoe tsy mahazo laka eto ny tanora, manao tsolotra ny mpitantana, manao valala an-karona ny vahoaka, sns. Mety hanampiana azy koa angamba ny hoe tsy misy ny fahaiza-manao, ny enti-manana, ny fitaovana, ny akora, …tsy misy n’inona n’inona eto e. Nefa anie dia misy ihany ny mahavita zavatra avy amin’ny tsy misy e. Misy ihany ny mahatsangana, mahajoro, mahajary. Amin’ny sampana sasany ary dia tena anisan’ny mandroso mihoatra ny hafa i Madagasikara. Anisan’izany ohatra, raha ilaina, ny fampiasana ny Aterineto izay isan’ny avo lenta indrindra eto Afrika.
Noho izany, raha ny hevitro no lazaina dia tokony hatao foana izay hetsika azo atao ka heverina fa hitondra soa ho an’ny tena, ny manodidina ary ny tanindrazana. Maha-te hidera raha ny tanindrazana no atao loha-laharana. Mahafinaritra koa raha ny mpiara-monina no tsinjovina mialoha ny tena. Nefa na dia tia tena aza ianao ka mitady izay mahasoa anao, raha tsy avy amin’ny fanimbana ny hafa sy ny tontolo iainana na mitondra ho amin’izany dia tena entaniko mihitsy ianao hanatanterak ny drafitrao. Raha tafita ianao, amin’ny lafiny ara-ekonomika, ara-tsosialy, ara-bola dia hiara-misondrotra aminao ny manodidina anao sy ny firenenao.
Noho izany ny hoe #raiseyourvoice , asandrato ny feonao, dia lohahevitra tsara. Mariky ny maha-olona sy ny fahafahany izany. Ilaina foana misy olona miteny, mihiaka raha toa ka misy ny zavatra tsara ho tenenina. Be dia be ny olana mbola misy eto amin’ity tany ity; eto Madagasikara manokana. Asandrato ny feonao mba hilaza ireny sy hanambara koa ny vahaolana entinao. Nefa na dia tsy azo lavina aza ny lanjan’ny teny; indrindra ny teny voasoratra; na dia efa nahatsapa izany mivaingana aza aho tamin’ny alalan’ireo lahatsoratra nosoratako tamin’ny blaogy sy gazety mpiseho amin’ny Aterineto dia amiko tsy #raiseyourvoice fotsiny fa koa « tairo ary hanao zavatra ».
Article précédent Rahoviana no hadio Antananarivo?
Article suivant Hira tsy fanadino : Ampitapitao!
Tirs à Ambohijatovo ce 23/04 à 12 h
Je suis à Analakely et j’entends les tirs et les explosions. Comme je suis totalemen…